စီးပွါးရေးတိုးတက်ရန်၊ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ၊
ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် လူအခွင့်အရေးကို သေခြာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမူ တိုက်ဖျက်ရန် ၊
ကျန်းမာရေး နှင့်စသော အရေးကြီးကိစ္စများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းအဖွဲ့မှ စီးပွါးရေးတိုးတက်မူအများဆုံးနိုင်ငံများမှာ အိန္ဒိယ၊ ဗြိတိန်၊ကနေဒါ နှင့် သြစတေးလျနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပြီး အများဆုံး အန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂.၆ ဘီလျံအထိဖြစ်သည်။
(၁) အင်တီဂွာ နှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ ၊ (၂) သြစတြေးလျ ၊(၃) ဘဟားမား ၊ (၄) ဘင်္ဂလားဒေရှ့်၊ (၅) ဘာဘဒိုစ့် ၊ (၆) ဘလိဇ် ၊ (၇) ဘော့ဆွာနာ ၊ (၈) ဘရူနိုင်း ၊ (၉) ကင်မရွန်း ၊ (၁၀) ကနေဒါ ၊ (၁၁) ဆိုက်ပရပ်စ် ၊ (၁၂) ဒိုမီနီကန် (၁၃) ဂမ်ဘီယာ ၊ (၁၄) ဂါနာ ၊ (၁၅) ဂရီနေဒါ ၊ (၁၆) ဂိုင်ယာနာ ၊ (၁၇) အိန္ဒိယ ၊ (၁၈) ဂျမေကာ ၊ (၁၉) ကင်ညာ ၊ (၂၀) ကီရီဘတ်စ် ၊ (၂၁) လီဆိုသို ၊ (၂၂) မော်လဝီ ၊ (၂၃) မလေးရှား ၊ (၂၄) မော်တာ ၊ (၂၅) မော်လ်ဒိုက် ၊ (၂၆) မောရစ်ရှ ၊ (၂၇) မိုဇမ်ဘစ် ၊ (၂၈) နာရူရူး ၊ (၂၉) နယူးဇီလန် ၊ (၃၀) နိုင်ဂျီးရီးယား၊
1.The Association of Commonwealth Universities (since 1986)
2.Commonwealth Forestry Association (since 1952)
3.Commonwealth Games Federation (since 1952)
4.Commonwealth Magistrates and Judges’ Association (since 1955)
5.Commonwealth Parliamentary Association (since 1989)
6.The Commonwealth Youth Exchange Council (since 1998)
7.The English-Speaking Union of the Commonwealth (since 1952)
8.Royal Commonwealth Ex-Services League (since 1952)
9.The Royal Commonwealth Society (since 1952)
10. Sightsavers (The Royal Commonwealth Society for the Blind) (since 1952)
11. The Victoria League for Commonwealth Friendship (since 1952)တို့ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော် ဖန်ကမ်းခြေ ၃ ခုအကြောင်း